304 mesh silig bir ah oo aan toos ahayn
Mesh birta aan fiicnayn waxaa loo qaybin karaa 316 mesh birta ah iyo 304 mesh birta ah sida ku cad alaabta;
1. faa'iidooyinka 316 mesh birta ah:
18Cr-12Ni-2.5Mo waxaa lagu daraa Mo, sidaa darteed iska caabbinta daxalka, caabbinta daxalka atmospheric iyo xoogga heerkulka sare ayaa si gaar ah u wanaagsan. Lagu isticmaalo xaaladaha adag, way ka dhib yar tahay daxalka marka loo eego biraha kale ee chromium-nickel ee ku jira biyaha cusbada, biyaha baaruudka ama cusbada halogen. Iska caabbinta daxalka ayaa ka fiican 304 mesh birta ah, waxayna leedahay iska caabin daxalka wanaagsan ee saxarka iyo habka wax soo saarka waraaqaha. Waxaa intaa dheer, 316 mesh birta aan fiicnayn ayaa aad ugu adkeysaneysa daxalka badda iyo jawiga warshadaha daxalka leh marka loo eego 304 mesh bir ah oo aan fiicnayn.
2. Faa'iidooyinka 304 ee mesh birta ah:
304 mesh birta aan fiicnayn waxay leedahay iska caabin daxalka aan wanaagsanayn iyo iska caabinta daxalka intergranular wanaagsan. Tijaabada, waxaa lagu soo gabagabeeyay in 304 mesh birta aan-ka-soo-baxa ah ay leedahay iska caabin adag oo daxalka ah oo ku jira nitric acid oo leh fiirsashada ≤65% oo ka hooseysa heerkulka karkarinta. Waxa kale oo ay leedahay caabbinta daxalka wanaagsan ee xalalka alkaline iyo inta badan asiidhyada organic iyo inorganic.
Mesh Dia(mm) 1X30 mitir miisaanka saafiga ah (kg) Aperture(mm)
Qalabka: silig bir ah oo aan lahayn
Tayada agabka:AISI302 sus302 SS201 SS304 SS304L SS316 SS316L SS310 SS310S SS430 SS309 iwm
Isticmaalka siliga birta ah
1. Waxa loo isticmaalaa baadhista iyo shaandhaynta xaaladaha deegaanka ee aysiidhka iyo alkali, sida muraayada dhoobada ee warshadaha batroolka, warshadaha fiber kiimikaad, shaashad ahaan, koronto-samaynta
Loo isticmaalo macdanta, batroolka, kiimikooyinka, cuntada, dawooyinka, warshadaynta mishiinada iyo warshadaha kale.
3: Waxa loo isticmaalaa baadhista iyo shaandhaynta hoostooda acid iyo deegaanka alkali, screen dhoobada warshadaha batroolka, for screen in industry fiber chemical, for pickling in electroplating warshadaha, warshadeenu waxay naqshadayn kartaa oo soo saari kartaa noocyo kala duwan oo badeecooyin ah iyadoo loo eegayo baahida isticmaalayaasha ...
Kala-soocidda alaabta Kala-saarista alaabta mesh silig birta aan-aheyn:
1. Shabakadda siligga birta ah ee aan-caadiga ahayn ee bannaan: Habka ugu caansan ee tolnimada waxaa si weyn loogu isticmaalaa wax soo saarka warshadaha iyo nolosha madaniga ah. Tilmaamaha ugu muhiimsan waa in cufnaanta xajinta iyo dhexroorka fiilada qulqulaya ay isku mid yihiin.
2. Qalabka mesh laba jibbaaran ee birta ah: silig birta galvanized, silig birta ah, silig naxaas ah, silig aluminium, iwm. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha iyo dhismaha si loo baaro ciidda, sifeynta dareeraha iyo gaaska. Waxa kale oo loo isticmaali karaa ilaalinta badbaadada qalabka farsamada, iwm.
3. Mesh mesh bir ah oo cufan/maro cufan ah Qalabka: silig birta ah, silig birta kaarboon hooseeya, silig nikkel, silig naxaas ah, silig polyester, iwm Astaamaha: Saxnaanta shaandhaynta wanaagsan, xoogga culeyska sare ee shabagga ka soo horjeeda. Isticmaala: loo isticmaalo hawada sare, batroolka, kiimikaadka, cilmi baarista sayniska iyo warshadaha gaadiidka, iyo sidoo kale samayn kara shabaqyada sanduuqa qadada, shabaqyada dhaqida dhuxusha, iwm.
Hore: Alaabta gaarka ah ee 14-300 mesh mesh naxaas ah
Xiga: Beerta cawska ah ee aan birta lahayn ee bamboo ilaaliyaha